“गठबन्धन” भनिने ठगबन्धनले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हान्यो: विष्णु रिमाल
14th February, 2022 Mon १०:२८:३४ मा प्रकाशित
काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिमालले “गठबन्धन” भनिने ठगबन्धनले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हानेको बताएका छन् । रिमालले जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको एमालेले पनि जवाफ दिने बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– “गठबन्धन भनिने ठगबन्धनले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हानेको छ । ढुंगा सर्वोच्चमा बज्रिएको छ । भनिन्छ नि– फर इन एभ्रि एक्सन, दियर इज आयन ईक्वेल एण्ड अपोजिट रियाक्सन ! हात छोड्नेले सोचेरै त हात छोडेका होलान् नी ?''
Tags नेकपा कम्युनिष्ट नेकपा एमाले चोलेन्द्रशम्शेर जबरा